काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, किन भने यस्तो ? — Imandarmedia.com
काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, किन भने यस्तो ?
बिभिन्न रोग लागेका व्यक्तिहरुले एक गिलास दुधमा सानो एक चमच बेसार राखेर खाँदा त्यसले रोग नियन्त्रण गर्न निकै ठूलो काम गर्ने उनले बताए। नेपालमा आइतबार थप १ हजार २२१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ३८ हजार ५६१ पुगेको छ । आज थपिएका मध्ये ३४८ महिला र ८७३ पुरुष रहेका छन् ।
यसअघि कहाँ कतिले ज्यान गुमाए ?
शुक्रबार पनि कोरोनाले १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । मोरङकी ५६ र ६५ वर्षीया २ महिला, भक्तपुरकी ६४ वर्षीया महिला, मकवानपुरकी ७१ वर्षीया महिला थिए । त्यसैगरी उदयपुरका ५२ वर्षीय पुरुष, पर्साका ७२ वर्षीय पुरुष, धनुषाका ४५ वर्षीय पुरुष, सिरहाका ५५ वर्षीय पुरुष, झापाका ८३ वर्षीय पुरुष, चितवनका ५१ वर्षीय पुरुष, कास्कीका ५२ वर्षीय पुरुष र रुपन्देहीका ६० वर्षीय पुरुष थिए ।
बिहीबार कोरोनाका कारण ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसैगरी गत बुधबार कोरोनाका कारण ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै गत मंगलबार कोरोनाले ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमा काठमाडौंकी ७१ वर्षीय महिला, सिरहाका २२ वर्षीय पुरुष, पर्साका ६८ वर्षीय पुरुष, धनुषाका ७६ वर्षीय पुरुष, काठमाडौंका ७४ र ६६ वर्षीय पुरुष र रुपन्देहीका ५३ वर्षीय पुरुष थिए ।